We are proud to say that 1 of our products became #1 being-pirated software made in Myanmar. Piracy is high, as you may know. Our products range fromavery basic essential language-support localization software to airline e-ticketing systems.
မြန်မာစာကို ယူနီကုဒ်စနစ်ဖြင့် professional ကျကျ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
font အမျိုးပေါင်း ၃၀ ပါဝင်သည်။
Win Myanmar 4
မြန်မာစာကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
font အမျိုးပေါင်း ၁၀၀ ခန့် ပါဝင်သည်။
Win Innwa 5
မြန်မာစာကို ယူနီကုဒ်စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ font ၁ ခုသာ ပါဝင်သည်။
Win Innwa 4
မြန်မာစာကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ font ၁ ခုသာ ပါဝင်သည်။
ကားရောင်းချသူနှင့် ဝယ်သူများအကြား ခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်နိ်ုင်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသော အခမဲ့ ကားရောင်းဝယ် andriod mobile application တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကားဝယ်ရောင်း အကျိုးတော်ဆောင်များသာမက တစ်ဦးချင်း ဝယ်ရောင်း ပြုလုပ်လိုသည့် ကားများကို တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
mmHome mobile application သည် အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ် ငှားရမ်း လိုသူများ အတွက် နေရာဒေသ ပေါင်းစုံမှ ရောင်းဝယ် ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များကို အခမဲ့ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ရန် တီထွင်ဖန်တီးထားသော mobile application တစ်ခုဖြစ်သည်။
mmJob mobile application သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ပေါင်းစုံမှ အလုပ်ခေါ်စာများ၊ အလုပ်အကိုင် နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်လျှက် ရှိသော သတင်းအချက်များကို အချိန်မီ အခမဲ့ ဖြန့်ဖြူးပေးနေသော အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး mobile application တစ်ခုဖြစ်သည်။
mobile ဖုန်း၊ simcard ရောင်းချသူများ၊ ၀ယ်ယူသူများ အချင်းချင်း ဆက်သွယ် ပေးနိင်ရန်, mobile ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော နောက်ဆုံးပေါ် ပစ္စည်းများအကြောင်းကို သိရှိနိင်ရန် ရွည်ရွယ်ထုတ်လုပ် ထား​သော phone selling, buying, information mobile app တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူသုံးအများဆုံး သတင်းမီဒီယာ ၀က်ဆိုဒ်များမှ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရ နေစဉ့်သတင်းများ ကို တစ်နေရာတည်းတွင် မြန်မာဘာသာဖြင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးနေသော mobile application တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူသုံးအများဆုံး သတင်းမီဒီယာ ၀က်ဆိုဒ်များမှ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရ နေစဉ့်သတင်းများ ကို တစ်နေရာတည်းတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးနေသော mobile application တစ်ခုဖြစ်သည်။
<== 1mobile download may not work